'Ungathathi imishwalense eminingi' | Isolezwe
'Ungathathi imishwalense eminingi'
intandokazi / 23 November 2017, 11:34am / ZANELE MTHETHWA
UKHUZA umkhuba wokuthatha imishwalense engenasidingo uNksz Wendy Ndlovu oyiRegional Manager yakwaMetropolitan
ABANTU abamnyama basasaba ukunqaba uma beshelwa yizinkampani zemishwalense ezifuna ukujoyinwa, okungezinye zezinto ezibadalela izikweletu ezingapheli.
Lawa ngamazwi kaNksz Wendy Ndlovu (41), oyiMenenja yakwaMetropolitan KwaZulu-Natal. UNksz Ndlovu owaqala ukungena kulo mkhakha wemishwalense ngokugcwele ngo-1999, wadonswa ukuthi baningi emndenini wakhe abazithole besenkingeni ngenxa yemishwalense abayijoyinile. Unina obenguthisha, wajoyina umshwalense wokufundisa yena (uNksz Ndlovu) okuthe sekushaya isikhathi sokuthi ukhokhe kwaba nenkinga.
“Ngathola ukuthi umama wayengijoyinele umshwalense wokufunda, okuthe sekumele ngiwusebenzise wakhokhela imali yokubhalisa kuphela. Ngithe sengimbuza kahle ngathola ukuthi kuwona lo mshwalense ubebuye avunyelwe ukuthi aboleke, yingakho agcina ethola imali encane. Baningi nabanye emndenini engathola ukuthi bebenenkinga efanayo. Ungathathi umshwalense ongawudingi”
UNksz Ndlovu wafundela iFashion Design and Technology eNatal Technikon esibizwa ngeDurban University of Technology, wangaqeda ngenxa yokuswela imali. Uthe kube nzima ukuthola umsebenzi engenazo iziqu, okwenza wabheka noma onjani angawuthola. Unina wamtshela ukuthi bekufike abantu emsebenzini wakhe, bezofuna abazosebenzela inkampani yomshwalense. Wangena kanjalo kulo mkhakha ngo-1997 kodwa engaqashiwe ngokugcwele. Uveze ukuthi ngaleso sikhathi ayikho inkampani eyayifuna ukumqasha ngenxa yokuba mncane ngeminyaka. Nokho kumsizile ukuqeqeshwa ukuze athole isipiliyoni.
Uthe baningi abamnyama abangenalo ulwazi ngezezimali, okwenza bathathe nemishwalense abangayidingi. Ugxeka nozakwabo kulo mkhakha athe basuke bebheke kuphela imali, bangamchazeli kahle umuntu.
“Abamnyama basanenkinga yokuthi bavele bajoyine nje umshwalense ngoba nakhu sekuthiwe abawuthathe. Umuntu agcine ekhokhela imishwalense eminingi angayidingi. Kuwumsebenzi wethu esisebenza ezinkampanini zemishwalense ukuthi sichazele abantu ngesimo sezimali. Umuntu kumele umchazele ukuthi yini ayidinga kakhulu, ngokubheka isimo sakhe sezimali. Nomuntu akumele athathe iomishwalense eminingi angayidingi”
Echaza ngomsebenzi wakhe, uthe kumele abheke ukunyusa kwezinga lokudayiswa komshwalense esifundazweni. Kumele abheke namathuba lapho bengakha khona ubudlelwano kwezamabhizinisi. Kudingeka aphinde akhuthaze, abe yiso nakubasebenzi abangaphansi kwakhe.